အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Ashgabat Railway Station (5731113086).jpg
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အက်ရှ်ဂါဘတ်၏ တည်နေရာ
ကိုဩဒိနိတ်: 37°56′N 58°22′E﻿ / ﻿37.933°N 58.367°E﻿ / 37.933; 58.367ကိုဩဒိနိတ်: 37°56′N 58°22′E﻿ / ﻿37.933°N 58.367°E﻿ / 37.933; 58.367
၄၄၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၇၀ စတုရန်းမိုင်)
၂၁၉ မီတာ (၇၁၉ ပေ)
၂၃၀၀/km၂ (၆၁၀၀/sq mi)
အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့ (Turkmen: Aşgabat, တမ်းပလိတ်:IPA-tk) — formerly named Poltoratsk (ရုရှား: Полтора́цк, IPA: [pəltɐˈratsk]) သည် ဗဟိုအာရှဒေသရှိ ကာရာကွမ်း သဲကန္တာရ (Karakum Desert)နှင့် ကာပတ်ဒါ့ဂ်တောင်တန်း (Kopet Dag mountain range) တို့အကြားတွင် တည်ရှိပြီး တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။
၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် မြို့အား တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် တာ့မန် ဆိုဗီယက် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ၏ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အက်ရှ်ဂါဘတ်ငလျင်ကြောင့် မြို့တော်ရှိ နေရာအတော်များများမှာ ပျက်ဆီးခဲ့ပြီး သမ္မတ ဆာပါမူရတ် နီယာဇော့ဗ်လက်ထက်တွင် မြို့တော်အား တဖန်ပြန်လည် မွမ်းမံခဲ့သည်။ အာမူးမြစ်မှ သွယ်ယူ၍ထားသော ကာရာကွမ်းတူးမြောင်းသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ မြို့တော်အား ဖြတ်သန်း၍ စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။
၃.၁ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပထမဆုံးသော ဘဟာအီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၅ သိပ္ပံနှင့် ပညာရေး
၇ အထင်ကရ နေရာများ
၉.၁ အမွှာမြို့နှင့် ညီအစ်မမြို့များ
အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့ကို တာ့ခ်မန်ဘာသာစကားဖြင့် Aşgabat ဟုခေါ်ပြီး (Russian: Ашхабад, ရောမအက္ခရာဖြင့်: Ashkhabad) ၁၉၂၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ထိ ‌ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ပါရှန်းဘာသာအရ Ešq-ābād (عشق‌آباد) ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၇ ခုနှစ်အထိ မြို့တော်အမည်ကို ဒေသခံတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ပါဗယ် ဂီရာစီမာဗစ်ချ် ပိုးသာရာစကီး(Pavel Gerasimovich Poltoratskiy)အမည်ကို အစွဲပြု၍ ပိုးသာရာစ်ခ်မြို့ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ခေတ်သစ် ပါရှန်းဘာသာစကားအရဆိုလျှင် မြို့တော်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ "အချစ်မြို့" သို့မဟုတ် "သံယောဇဉ်မြို့"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ရှေးခေတ်အခေါ်အဝေါ်များမှတဆင့် အဆင့်ဆင့်ရွေ့လျားပြောင်းလဲခဲ့ကြဟန် ရှိသည်။ တာ့ခ်မန် သမိုင်းပညာရှင် Ovez Gundogdiyev အဆိုအရ ဤအမည်သည် ဘီစီ ၃ ရာစု ပါသီးယန်းခေတ် အင်ပါယာတည်ထောင်ခဲ့သူ ပထမ အာဆက်စီ(Arsaces I of Parthia)၏ အမည်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆခဲ့ပြီး ပါရှန်းဘာသာအရ Ashk-Abad ( Ashk/Arsaces ၏ မြို့) မှ အဆင့်ဆင့်ရွေ့လျားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။
တည်ထောင်ခဲ့သည့် သက်တမ်းမကြာသေးသော အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့သည် ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှ ခံတပ်မြို့အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အနီးရှိ အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာတစ်ခုကို အစွဲပြု၍ အမည်မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး) ပါသီးယန်း အင်ပါယာ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်သော နီဆာမြို့(Nisa)နှင့် မနီးမဝေးတွင် တည်ရှိပြီး ဘီစီ ၂ ရာစုတွင် ဝိုင်များထုတ်လုပ်ရာ နေရာအဖြစ် ညွှန်းဆိုကြသော ဘီစီ ၁ ရာစုတွင် ငလျင်(၁၉၄၈ အက်ရှ်ဂါဘတ်ငလျင်၏ အစောပိုင်း နိမိတ်)ကြောင့် လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့သော ပိုးလမ်းမဟောင်းကြီးပေါ်ရှိ ကွန်ဂျကာလာ(Konjikala) နေရာတွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည့် မြေနေရာ အနေအထားကောင်းမွန်မှုကြောင့် ကွန်ဂျီကာလာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး ၁၃ ရာစု မွန်ဂိုတို့ မဖျက်ဆီးမီအထိ ၎င်း၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ ကျော်ဇောခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပြီးနောက် ၁၉ ရာစု ရုရှားတို့ မသိမ်းပိုက်မီကာလအထိ ရွာငယ်လေးအဖြစ် ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့သည် Geok Tepe တိုက်ပွဲအပြီးမှ အက်ခါစာချုပ်(Akhal Treaty)အရ ပါရှန်းလက်အောက်မှ ရုရှားအင်ပါယာသို့ ပေးအပ်လိုက်ရသော မြို့ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှတို့ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော ပါရှားနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်ဖြစ်ရာ ရုရှားတို့အနေဖြင့် ဤဒေသအား တိုးတက်ခိုင်မာအောင် ကြိုးစားခဲ့ကြရာ ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၂,၅၀၀ ရှိရာမှ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် ၁၉,၄၂၈ ဦးရှိလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင် အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့အား ဥရောပဟန် အဆောက်အဦများ၊ ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များကြောင့် သာယာဖွယ်မြို့လေးအဖြစ် ဆိုကြသည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော ဘဟာအီ ဝတ်ကျောင်းဆောင်ကို အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ငလျင်ကြောင့် ဆိုးရွားစွာ ပျက်ဆီးခဲ့ရပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်တော့ လုံးဝ ဖြိုဖျက်ခဲ့ရသည်။ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဘဟာအီ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသည် အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့၌ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ကြီးမားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပထမဆုံးသော ဘဟာအီဘုရားရှိခိုးကျောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ပထမဆုံးသော ဘဟာအီဝတ်ပြုကျောင်း (၁၉၀၈ ခုနှစ်)
အက်ရှ်ဂါဘတ်အား ရုရှားတို့အုပ်စိုးစဉ်က မြို့ရှိ ဘဟာအီကိုးကွယ်သူအရေအတွက်ဟာ ၁,၀၀၀ ကျော်လာခဲ့ပြီး ဘဟာအီအသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ၊ ဆေးကုသခွင့်များနှင့် ဂူသင်္ချိုင်းများကိုပါ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းဟာ ပထမဆုံးသော ဘဟာအီဒေသ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းထဲက တစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် ထို့အဖွဲ့အစည်းမှ ပထမဆုံးသော ဘဟာအီ ဝတ်ပြုကျောင်းဆောင်ကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီး အာရဗီဘာသာဖြင့် mašriqu-l-'aḏkār (အာရပ်: مشرق اﻻذكار‎) ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော ထိုဝတ်ပြုရာနေရာတွင် ဘာသာတရာအားလုံးသည် ဂိုဏ်ဂဏကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ ဘုရားအား ဝတ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆောက်အဦကို `Abdu'l-Bahá ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အက်ရှ်ဂါဘတ်ရှိ ဘဟာအီသာသနာသမိုင်း ရေးသားသူ Ustad' Ali-Akbar Banna Yazdi မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဝတ်ပြုကျောင်းအား ဥယျာဉ်တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားပြီး ဥယျာဉ်ထောင့် လေးခုတွင် အဆောက်အဦ ၄ ခုတည်ရှိရာ ၎င်းတို့မှ ကျောင်း၊ ခရီးသွာ ဘဟာအီတို့နားခိုရာ အဆောင်၊ ဆေးရုံငယ်နှင့် မာလီ နေထိုင်ရာ အဆောက်အဦတို့ဖြစ်သည်။
ဆိုဗီယက်တို့၏ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ မူဝါဒအောက်တွင် ဘဟာအီဘာသာသည် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းဥပဒေတို့ကို လိုက်နာခဲ့ရပြီး ၁၉၂၈ ခုနှစ်ရောက်မှသာ ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ငလျင်ဒဏ်ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရပြီး ဝတ်ပြုကျောင်းဆောင် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ရာ ၎င်းကို အနုပညာပြတိုက်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် အပြီးတိုင် ဖြိုဖျက်ခဲ့ရသည်။
အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့ရှိ အဓိကအားကစားရုံများမှာ အိုလံပစ် အားကစားကွင်း၊ အက်ရှ်ဂါဘက် အားကစားကွင်း၊ အမျိုးသား အိုလံပစ် ရေခဲပြင်စကိတ်ကွင်း၊ ဆောင်းရာသီအားကစားကွန်ပလပ်စ်နှင့် အိုလံပစ်အဏ္ဏဝါအားကစားကွန်ပလပ်စ်တို့ ဖြစ်သည်။
အက်ရှ်ဂါဘတ်သည် ငါးကြိမ်မြောက် အာရှ မိုလုံလေလုံအားကစားနှင့် သိုင်းပြိုင်ပွဲ (Asian Indoor Games and Martial Arts)အတွက် အိမ်ရှင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီး ဤသည်မှာ အာရှမိုလုံလေလုံအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်ခံရသော ဗဟိုအာရှဒေသမှ ပထမဆုံး မြို့လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြို့လယ်တောင်ပိုင်းတွင် အိုလံပစ်အားကစားကျေးရွာကို ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့သည်. ၂၀၁၈ ခုနှစ် IWF World Weightlifting Championships ကိုလည်း အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သေးသည်။
တာ့ခ်မင်နစ်စတန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်ဆုံးလိဂ်တစ်ခုဖြစ်သော Ýokary Liga တွင် ပါဝင်သော ပရောဖက်ရှင်နယ် အားကစားကလပ်များဖြစ်သည့် Altyn Asyr၊ FC Ashgabat၊ HTTU Aşgabat နှင့် FC Hazyna တို့လည်း မြို့တွင် တည်ရှိ၍ နေပေသည်။
အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့သည် အမွှာမြို့နှင့် ညီအစ်မမြို့များအဖြစ် :
ယေရေဗန်မြို့, အာမေးနီးယားနိုင်ငံ (၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍)
↑ Назначен новый мэр Ашхабада
↑ Ashgabat | Definition of Ashgabat in English by Oxford Dictionaries။
↑ Turkmenistan: Government Orders People Out Of Their Homes In Name Of 'Urban Renewal' (July 21, 2004)။ ၃၀ ဒီ ၂၀၁၉ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brief Note on Turkmenistan။ February 18, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃၀ ဒီ ၂၀၁၉ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Клычев၊ Анна-Мухамед (1976)။ Ашхабад (Russianဘာသာစကားဖြင့်)။ Изд-во "Туркменистан"။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ How Old is Ashgabat?။ Turkmeniya.tripod.com။ ၂ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pospelov, pp. 29–30
↑ Konjikala Archived October 29, 2014, at the Wayback Machine.
↑ MaryLee Knowlton (2006)။ Turkmenistan။ Marshall Cavendish။ p. 40။ ISBN 978-0-7614-2014-9။
↑ Chisholm၊ Hugh, ed. (1911)။ "Askabad" ။ Encyclopædia Britannica။2(11th ed.)။ Cambridge University Press။ p. 762။ Cite has empty unknown parameters: |HIDE_PARAMETER15=၊ |HIDE_PARAMETER13=၊ |HIDE_PARAMETER14c=၊ |HIDE_PARAMETER14=၊ |HIDE_PARAMETER9=၊ |HIDE_PARAMETER3=၊ |HIDE_PARAMETER1=၊ |HIDE_PARAMETER4=၊ |HIDE_PARAMETER2=၊ |HIDE_PARAMETER8=၊ |HIDE_PARAMETER20=၊ |HIDE_PARAMETER5=၊ |HIDE_PARAMETER7=၊ |HIDE_PARAMETER10=၊ |separator=၊ |HIDE_PARAMETER14b=၊ |HIDE_PARAMETER6=၊ |HIDE_PARAMETER11=, နှင့် |HIDE_PARAMETER12= (အကူအညီ)
↑ Baha’i House of Worship in Ashgabat။ Bahai.us။ August 8, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၈ ဇန် ၂၉ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Smith၊ Peter (2000)။ "Mashriqu'l-Adhkhár"။ A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith။ Oxford: Oneworld Publications။ p. 235။ ISBN 1-85168-184-1။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Rafati၊ V.; Sahba, F. (1989)။ "Bahai temples"။ Encyclopædia Iranica။
↑ Akiner၊ Shirin (1991)။ Kegan၊ Paul (ed.)။ Cultural Change and Continuity in Central Asia။ Routledge။ p. 293။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Baha'i House of Worship – Ashkabad, Central Asia။ The National Spiritual Assembly of the Baha'is of the United States (2007)။ August 8, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၁ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Effendi၊ Shoghi (1936-03-11)။ The World Order of Bahá'u'lláh။ Haifa, Palestine: US Bahá’í Publishing Trust, 1991 first pocket-size edition။ pp. 64–67။
↑ "Sister Cities Delegation to visit Ashgabat from Albuquerque, New Mexico." U.S. Embassy in Turkmenistan website. May 20, 2015. Retrieved March 25, 2018.
↑ Kardeş Kentleri Listesi ve5Mayıs Avrupa Günü Kutlaması [via WaybackMachine.com] (in Turkish)။ Ankara Büyükşehir Belediyesi – Tüm Hakları Saklıdır။ January 14, 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Ashgabat becomes Astana’s new sister city." Archived April 30, 2017, at the Wayback Machine. Tengrinews in KazSocial. April 18, 2017. Retrieved March 25, 2018.
↑ Посольство України в Туркменістані။ Mfa.gov.ua။ 28 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Города-побратимы။ Eternityclub.kiev.ua (December 4, 2010)။3December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ YEREVAN MUNICIPALITY: Partner cities။ Yerevan Municipal Government။ ၂ ဇန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့&oldid=738363" မှ ရယူရန်
CS1 uses ရုရှ-language script (ru)
Turkmenဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မတ် ၂၀၂၂၊ ၂၀:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။